Weerar Ka Dhacay Degmada Hilwaa Ee Magaalada Muqdisho. – Calamada.com
Weerar Ka Dhacay Degmada Hilwaa Ee Magaalada Muqdisho.
calamada May 8, 2016 1 min read
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxey habeenkii xalay weerar culus ku qaadeen isbaaro maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka ay dhigteen qeybo ka mid ah degmada Hilwaa ee magaalada Muqdisho.
Isbaarada Mujaahidiinta ay weerareen ayaa ah isbaaro maleeshiyaatka dowlada federaalka ay dhigteen agagaarka Xerada Maslax oo dhacda duleedka xaafada Suuqa xoolaha’waxaana dagaalka la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Dhawaaqa rasaasta dagaalka waxaa si aad ah looga maqlayay qeybo badan oo ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho’iyadoona si rasmi ah aan loo xaqiijin karin khasaraaha maleeshiyaatka dowlada kasoo gaartay dagaalka.
Dagaalkan ayaa kusoo aadaya xilli maalintii shalay qarax bam oo ka dhacay qeybo ka mid ah suuqa Bakaaraha lagu dhaawacay saddex askari oo ka tirsan maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka.
Previous: Dhageyso Warka Subax Ee Andalus 01-08-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 01-08-1437 Hijri.